Ithegi: izikhokelo | Martech Zone
Inkqubela phambili enkulu kuhlalutyo lokuthengisa kunye namaxwebhu kukuvela kweemephu zohambo lwabathengi ukunceda uxwebhu, ukulinganisa, kunye nokuphucula ukusebenza kwakho kwintengiso-ngakumbi kwi-Intanethi. Yintoni imephu yohambo loMthengi? Imephu yohambo lwabathengi yindlela owabona ngayo amava abathengi bakho ngophawu lwakho. Imephu yohambo lwabathengi ibhala amanqaku abathengi bakho kwi-intanethi nangaphandle kweintanethi kunye namaxwebhu ngendlela olinganisa ngayo ukusebenza kweepoyinti nganye. Oku kwenza ukuba abathengisi baqonde ngcono ukuba abathengi bathini